Galmudug oo war ka soo saartay doorshada sanadkaan dhacaysa. | RADIO Haatuf
Home / WARARKA MAANTA / Galmudug oo war ka soo saartay doorshada sanadkaan dhacaysa.
Galmudug oo war ka soo saartay doorshada sanadkaan dhacaysa.
OgaalFM- Dowlad Goboleedka Galmudug waxay si aad ah uga wallaacsan tahay soo ifbaxa kooxo yar oo doonaya inay carqaladeeyaan hannaanka doorashada sannadka 2016-ka.
Previous: Madaxweynaha Kenya oo QM kala hadlaya arimaha Qaxootiga.
Next: Kalfadhiga 37 Ee Baarlamaanka Puntland oo maanta furmay.